सङ्क्रमितको पुनः कोरोना परीक्षण गरिँदै - Lokpath Lokpath
२०७७, १७ जेष्ठ शनिबार ०८:३९
प्रकाशित मिति : २०७७, १७ जेष्ठ शनिबार ०८:३९
बैतडी । बैतडीका कोरोना सङ्क्रमितको पिसीआर परीक्षण पुनः गरिने भएको छ । जिल्ला अस्पतालको आइसोलेसनमा उपचाररत शिवनाथ गाउँपालिका–२ का २२ वर्षीय युवकको पिसीआर परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन गरिने भएको हो ।
स्वाब सङ्कलनपश्चात परीक्षणका लागि धनगढी पठाइने जिल्ला अस्पताल बैतडीका प्रमुख डा. वसन्तराज जोशीले जानकारी दिए ।
जेठ ९ गतेदेखि आइसोलेसनमा रहेका ती युवकमा कोरोना ठिक भए÷नभएको जानकारी लिन पिसीआर परीक्षण गरिन लागिएको हो । सङ्क्रमित पुष्टि भएको कम्तीमा पनि एक हप्तामा पिसीआर परीक्षण गर्ने गरिन्छ ।
लगातार दुई पटकसम्म पिसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि सङ्क्रमित निको भएको पुष्टि हुने र त्यसपछि डिस्चार्ज गरिने उनले बताए ।
सङ्क्रमितको एक हप्तापछि २४ घण्टा लगातार दुईपटक पिसीआर परीक्षण गर्ने गरिन्छ । गत वैशाख १५ गतेदेखि कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा रहेका ती युवकमा जेठ ९ गते कोरोना पुष्टि भएको थियो । सङ्क्रमित ती युवक चैत ६ गते भारतबाट आएका बुझिएको छ ।
बैतडीमा कोरोना सङ्क्रमितको सम्पर्कमा रहेका र आरडिटी पोजेटिभ देखिएका आठ प्रहरीसहित सबै ९९ जनाको पिसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ ।
पिसीआर रिपोर्ट नेगेभिट आउनेमा जिल्ला न्यायाधीशसहित अदालका कर्मचारी, प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित प्रशासनका कर्मचारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षकसहित प्रहरी, जिल्ला अस्पतालका चिकित्सकसहित स्वास्थ्यकर्मी, सङ्क्रमितका आफन्त र सङ्क्रमितसँगै थुनामा रहेका थुनुवा छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा रहेका शिवनाथ गाउँपालिका–२ का २२ वर्षीय युवकमा जेठ ९ गते कोरोना सङ्क्रमणको पुष्टि भएको थियो ।
हिरासतमा रहेका ती युवकमा कोरोना पुष्टि भएसँगै कन्टयाक्ट ट्रेसिङ गरी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेकाहरुको स्वाब सङ्कलन गरी पिसीआर परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य कार्यालय बैतडीका प्रमुख योगेशप्रसाद भट्टले जानकारी दिए। स्वाब सङ्कलन गरी पिसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएसँगै प्रहरी कार्यालय पनि सामान्य अवस्थामा फर्कन थालेको जनाइएको छ ।
जिल्ला अस्पताल बैतडीमा आइसोलेसनकक्षको क्षमता विस्तार गरिएको छ । यसअघि तीन श्ययाको क्षमता रहेको आइसोलेसनकक्षको क्षमता विस्तार गर्दै ८ शैयाको बनाइएको हो ।
कोरोनाका शङ्कास्पद र सङ्क्रमित व्यक्ति राख्न सहज होस् भनेर आइसोलेसनको क्षमता विस्तार गरिएको जिल्ला अस्पताल बैतडीका प्रमुख डा. वसन्तराज जोशीले जानकारी दिए । रासस
कोरोना कहर : अमेरिकामा बिहीवार ६१ हजार भन्दा धेरै कोरोना संक्रमित थपिए
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको महामारी यतिबेला जताततै व्याप्त छ । यो समाचार तयार
कोरोनाको प्रकोप : भारतमा संक्रमितको नयाँ रेकर्ड